Lozam-pifamoivoizana :: Fiara mpitatitra nifatratra tamin'ny andrinjiro sy trano • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Fiara mpitatitra nifatratra tamin’ny andrinjiro sy trano
Niharan’ny lozam-pifamoivoizana, tetsy Ankazomanga, ny fiara iray taksibe marika « Mercedes 307 », tamin’ny alin’ny alakamisy tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany. Nifatratra tamin’ny trano sy andrinjiro ary tranokely fivarotana iray ny fiara.
Mpandeha vitsivitsy no tao anatiny. Naratra ny olona fito sy ny mpamily. Ny efatra amin’izy ireo no mbola manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly, hatramin’ny omaly tolakandro. Ny tanana sy ny tongotra ary ny taolan-damosina no tena voa tamin’ireo niharan-doza ireo.
Fantatra fa andiana olona avy namonjy fahoriana ireto tra-doza ireto. Tsy voafaritra mazava ny nahatonga ny fiara nifatratra teo an-tsisin-dalana, na mety ho olana teo amin’ny fiara na torimason’ny mpamily. Nantsoina ny sampana mpamonjy voina hanavotra an’ireo tra-boina. Efa tafavoakan’ny fokonolona avy tao anaty fiara ny mpandeha rehetra. Nitondra azy ireo tamin’ny fiara roa nihazo hopitaly sisa no nataon’ny mpamonjy voina.
Fiparitahan’ny tsimok’aretina Gadra iray mitondra ny “Covid 19” tao Antanimora
Fifandraisana tamin’ny jiolahy :: Kapiteny zandary iray nosamborina
Lalam-pirenena faharoa :: Mpamily namoy ny ainy navadiky ny kamiao